भीआईपीको रबाफमा सुरक्षाकर्मीको लर्को, कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ? - Nepal Face
भीआईपीको रबाफमा सुरक्षाकर्मीको लर्को, कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ?
काठमाडौँ। भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ ।
(२०७७ मंसिर ७ मा जारी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ अनुसार) कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
# भीआईपी # सुरक्षाकर्मी